श्याम राना मगर | Ratopati
बुधबार १९ मङ्सिर, २०७५ Wednesday, 04 August, 2021
गण्डकी प्रदेश सरकार खतरामा, यस्तो छ प्रदेशसभामा समीकरण access_timeपुस ११, २०७७
पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटन भए यता देशमा राजनीतिक हलचल बढेको छ । संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक हलचल बढेको...
पोखरा विद्युतीय शवदाह गृह विवादबारे स्थानीय भन्छन् - मनपरि मान्दैनौं access_timeमंसिर १३, २०७७
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १० को निर्माणाधीन विद्युतीय शवदाह गृह विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन बिना नै निर्माण अघि बढाएको भन्दै स्थानीयले निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । आफूहरुको स्वीकृति बिना नै मनपरि रुपमा निर्माण था...
कास्कीका नेता–कार्यकर्ता भन्छन्, ‘केन्द्रमा विवाद भएपनि हामी एक जुट छौँ’ access_timeकात्तिक २१, २०७७
पोखरा । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक द्वन्द्वले सिंगो पार्टीपंक्तिमा नै तरंग ल्याएको छ । पछिल्लो विवादले पार्टी नै फुट्न सक्ने टिप्पणी भइरहेका छन् । केन्द्रमा बेलाबेला चर्किरहने आन्तरिक द्वन्द्वले जिल्ला तहका नेता कार्यकर्ता वाक्क छन् । व्यक्ति...
गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफ्नै क्रिकेट मैदान बन्ने access_timeअसोज ३०, २०७७
पोखरा । आफ्नै लगानीमा प्रदेश सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट मैदान बनाउने भएको छ । टुरिजम सँगसँगै गण्डकी प्रदेशलाई स्पोर्टस् हब पनि बनाउने उद्देश्य अनुरुप प्रदेश सरकारले क्रिकेट मैदान तयार पार्न थालेको हो । पोखरा २२ पशुपतिघाटमा करिबन १२३ रोपनी जग्गामा अन्र्...
स्वीकृति पाए पोखराको बन्जि मंसिरदेखि सञ्चालनमा आउने access_timeअसोज २५, २०७७
पोखरा । पोखरा १७ रातोपैरोको बन्जि सरकारी स्वीकृति पाए आउँदो मंसिरको पहिलो साताबाटै सञ्चालनमा आउने भएको छ । बन्जि नेपाल एड्भेन्चर्स प्रालिले निर्माण गरेको बन्जिले निर्माणका सम्पूर्ण काम सकेर सञ्चालन तयारी थालेको हो । दुई वर्ष अघि निर्माण थालेको बन्जिको निर्माण क...
९५ प्रतिशत निर्माण सकिँदा यस्तो देखियो पोखरा–सराङकोट केबलकार (फोटोफिचर) access_timeअसोज २४, २०७७
पोखरा । पोखरादेखि सराङकोट जोड्ने केबलकारको ९८ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । स्ट्रक्चर, सिभिल वर्क र इलेक्ट्रिक लगायतका सबैजसो काम सकिइसकेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । बाँकी ५ प्रतिशत केबल तान्ने र गोन्डोला झुण्ड्याउन मात्रै बाँकी छ । त्यसको लागि जापानदेखि नै क...
खुल्न थाले पोखराका बन्द होटल-रेष्टुरेन्टका ताला access_timeअसोज १, २०७७
पोखरा । करिब ६ महिना लामो बन्दाबन्दीपछि बन्द होटल, रेष्टुरेन्टका ताला खुल्न थालेका छन् । गएको सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले होटल तथा रेष्टुरेन्टलाई पनि सञ्चालनमा आउने अनुमति दिएसँगै पोखराका होटल,-रेष्टुरेन्ट पनि खुलेका हुन् । यसअघि गत साउनमा सरकारले होटल तथा बरेष्टु...
कोरोनाको धक्का : पोखरा विमानस्थल निर्माण समयमै नसकिने access_timeभदौ १५, २०७७
पोखरा । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण लक्ष्यअघि नै नसकिने भएको छ । लक्ष्यभन्दा ६ महिनाअघि नै काम सकेर उडान भर्ने लक्ष्य लिएको विमानस्थलको काम कोरोना महामारीको कारण समयमै नसकिने भएको हो । सन् २०२१ भित्रमा निर्माण सक्ने म्याद तोकिए पनि निर्माण कम्पनीले ...
१४ औं महाधिवेशन : कास्की काँग्रेसमा नेतृत्वको दौडधुप access_timeभदौ ११, २०७७
पोखरा । नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन नजिकिँदै छ । आसन्न महाधिवेशनलाई लिएर नेतृत्वका लागि केन्द्रमा दाउपेच सुरु भइसक्यो । नेतृत्व आफ्नो हातमा पार्ने दाउमा केन्द्रका नेताहरु लागि परेका छन् । केन्द्रमा नेतृत्वको दाउपेच सुरु हुँदा कास्की काँग्रेस पनि नेतृत्वको होडमा ला...
‘अब त पानी नपरे नि हुन्थ्यो !’ access_timeसाउन ३१, २०७७
पोखरा । पानीको सतह बढेर सेती बगर पूरै भरिएको छ । धनबहादुर तामाङ बिहानैदेखि पानीको सतह कति बेला घट्ला भनेर हेरेर बसेका छन् । हिउँदयाममा सुख्खा रहने रामघाट सधै बर्खा लागेपछि रुप फेर्छ । अरु बेला घाम लाग्ने बित्तिकै पानीको सतह कम हुन्थ्यो । तर, यसपालि पाँ...
फेरि ताला लगाउने अवस्थामा पुगे पोखराका होटल व्यवसायी access_timeसाउन २८, २०७७
पोखरा । महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चार महिना लामो लकडाउन गर्यो । एक महिना अघि सरकारले लकडाउन फिर्ता लिएसँगै जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किदै थियो । फाट्टफुट्ट रुपमा व्यवसायच चल्न थालेका पनि थिए । तर, कोरोनाभा...
‘यो वर्ष त पाल्छु, अर्को वर्ष थाहा छैन’ access_timeसाउन २५, २०७७
पोखरा । लेकसाइडमा यतिबेला विदेशी पर्यटक छैनन् । लडाउनले यतै रोकिएकाहरुलाई पनि अन्र्तराष्ट्रिय उडान खोल्ने बित्तिकै जानुपर्ने छ । जानै नपरे पनि के गरुन् ! खर्च सकिएर बेखर्चि जो बनेका छन् । लक्ष्मण गौतम घरि खल्तिबाट मोबाइल झिक्छन् । एकै छिन हेर्छन् अनि खल्तिमै...
पोखरामा विद्युतीय शवदाह गृह विवाद : स्थानीयले दिए उच्च अदालतमा मुद्दा access_timeसाउन १५, २०७७
पोखरा । पोखरा महानगरले गत साल विद्युतीय शवदाह गृह सञ्चालनमा ल्याएको थियो । वातावरण मैत्री भनिएको उक्त विद्युतीय शवदाह गृह पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ९ शान्तिघाटमा पर्छ । शव पनि छिटो जलाउने मिल्ने र वातावरणीय प्रदुषण पनि कम गर्ने भन्दै महानगरले आधुनिक प्रविध...
यात्रुको पर्खाइमा फेवातालका डुंगा व्यवसायी access_timeसाउन ९, २०७७
पोखरा । १२० दिन लामो लकडाउन सकिएको छ । लकडाउन खुलेसंगै व्यापार व्यवसाय पनि खुलेका छन् । बिहीबारदेखि जिल्ला भित्र सार्वजनिक सवारी पनि चल्न थालेका छन् । यद्यपी, फेवातालका डुंगा व्यवसायीको अवस्था भने अझै उस्तै छ । ४ महिना लामो लकडाउन खेपेका फेवाका डुंगा व्यवस...
बागलुङको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ access_timeअसार २१, २०७७
पोखरा । बागलुङको क्वारेन्टिनमा मृत्यु भएका युवकको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका ४ खुंगाको क्वारेन्टाइनमा बसेका उनको गएराति मृत्यु भएको थियो । उनको दिउँसो आइतबार मात्रै रिपोर्ट आएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख ज...
स्याङ्जाका कोरोना संक्रमितको मृत्यु access_timeअसार ११, २०७७
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा उपचाररत स्याङ्जाका कोरोना संक्रमितको गए राती मृत्यु भएको छ । अस्पतालले दिएको जानकारी अनुसार गए राति ११ : ५५ मा उनको मृत्यु भएको हो । मृतक असार ८ गते आइसियूमा भर्ना भएका स्याङ्जा सिरुबारीका ५५ वर्षीय पुरुष रह...
गण्डकी प्रदेश : बजेटमाथिको छलफलमा सांसदबीच जुहारी access_timeअसार ५, २०७७
कानुन बनाउने ठाउँ हो संसद । संसदमा वैचारिक विमर्श त हुन्छ नै । यद्यपि, वैचारिक बहस छोडेर गण्डकी सरकारले ल्याएको छलफलमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरु एकअर्काप्रति छेडछाडमै बढी उत्रिएका छन् । बजेटमाथि तेस्रो दिनको छलफलमा सांसदहरुले अघिल्ला दिनहरुमा झै सत्त...
गण्डकी प्रदेशको बजेटमाथि छलफल : सत्तापक्षको समर्थन, विपक्षीको विरोध access_timeअसार ३, २०७७
लामो समयको बन्दाबन्दीले बजेटको आकार घट्ने अनुमान थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसेकेको बजेट आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानान्तरण हुने साथै आन्तरिक ऋणबाट समेत पुर्ति हुने गरि गण्डकी सरकारले ३४ अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । गण्डकी सरकारका आर्थिक माम...
पोखरामा फाट्टफुट्ट खुल्न थाले पसल access_timeजेठ २८, २०७७
पोखरा । महामारिको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामको लागि देश ७९ दिनदेखि लकडाउनमा छ । यद्यपि, कोरोना भाइरसले उग्ररुप लिन भने छाडेको छैन । सामाजिक दूरी कायम राखेर खोल्न मिल्ने व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका पोखराका व्यवसायीहरुले फाट्टफुट्ट पस...
गण्डकी सरकारको छैटौँ अधिवेशन : भोक मेट्ने गरी आएन विधेयक access_timeजेठ २७, २०७७
यसपटक गण्डकी प्रदेशको बर्खे अधिवेशन नदीपुरमा हुन सकेन । विश्वभर महामारी रुप लिएको कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको छ । जसको पहिलो शर्त छ, सामाजिक दूरी । कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने मान्यता बमोजिम नदीपुरस्...
पर्वतमा पनि थपिए संक्रमित, गण्डकीमा संक्रमित संख्या ३७ पुग्यो access_timeजेठ २०, २०७७
पोखरा । मंगलबार गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरसका १० नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । स्याङ्जा र पर्वतका ५–५ जना गरि मंगलबार १० नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुुसार स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेका २२, २६, ३२ र ४० वर्षीय...
गण्डकी प्रदेश बजेट : 'सुनै सुनले लेपेको बजेट आउछ किजस्तो लागेको थियो, घर गएर पढ्दा धन्नै आँसु झरेन' access_timeजेठ १९, २०७७
पोखरा । स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर गण्डकी प्रदेश सरकारले आइतबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥यो । सरकारले प्रस्तुत गरेको सोही नीति तथा कार्यक्रम माथि सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा छलफल चलेको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्तापक्षका सांस...
गण्डकीका सांसदलाई रोगले भन्दा भोकले जनता मर्ने चिन्ता ! access_timeजेठ १४, २०७७
पोखरा । गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन पोखरामा जारी छ । नदिपुरमा रहेको भवनमा सामाजिक दुरि कायम राख्न सम्भव नभएपछि पोखराको सभागृहमा बैठक चलि रहेको छ । बुधबार, दिउँसो १ बजेदेखि सुरु भएको बैठकको शुन्य र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले लकडाउनको कारण जनताहर...